Phoenix OS, yakanyatso dombo? Ye Remix Remix | Linux Vakapindwa muropa
Phoenix OS, yakanyatso dombo? by Remix OS
Mumazuva achangopfuura, Android X86-yakavakirwa kugovera kuri kuwana kutarisisa kwakawanda. Pamwe kubudirira kweApple kana pamwe kuri kukonzerwa nemharidzo yayo yepamutemo kuCES, ini handizive, mune chero mamiriro ezvinhu haisi iyo Remix OS chete asi kumwe kugovera kunodaidzwa Phoenix OS.
Ini handinyatso kuziva kuti ndokudaidza kugovera asi zvakangofanana kubvira vane linux kernel, seti yemukati uye maseva kunge graphical server, maneja wefaira, maneja wewindows, pre-akaisirwa mafomu, nezvimwe ... Tiri kuenda izvo zvanga zvichiparadzirwa, asi chokwadika, haisi GNU. Uye zvinoita sekunge kunyangwe Android ichionekwa seye Mahara Software chirongwa, idzi shanduro hadzisi dzakanyanya.
Phoenix OS inogona zvakare kutyora marezinesi eGPL
Isu takangozviona izvo Remix OS yakatyora akati wandei GPL uye Apache marezinesi. Muchiitiko chePhoenix OS haisati iri yakajeka asi kuvandudza kuri incipient zvakadaro zvakadaro marezinesi mazhinji haana kugadziriswa uye senge Remix OS, Phoenix OS inozvityorawo. Nekudaro, mutsauko uripo pakati pekugovera kumwe uye kumwe ndewekuti Jide akataura kuti Remix OS haisi Yemahara Software saka kutyora kuri pachena Phoenix OS haina kunyatsotaura kuti ndeipi mhando yehurongwa hwekushandisa iri.
Chero zvazvingaitika, usakanganwa kuti ese ari maviri Remix OS uye Phonenix OS anogona chete kushandiswa uye gadza kuburikidza neUSBkureva kuburikidza nekushanda kweLiveCD, haigone kuiswa pane hard drive asi ichi chichava chinhu chinogadziriswa nekukurumidza. Kunyangwe zvakadaro, kubva kuLinux Vakapindwa muropa isu tinokurudzira kuti iwe usarudze kushandisa kugoverwa kweGnu / Linux uye shandisa masisitimu anoshanda seyero yekuyedza, kwete yekombuta yekugadzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Phoenix OS, yakanyatso dombo? by Remix OS
Chinongedzo cheiyo peji iwe yauri kutaura nezvayo haimborwadzi ...
http://www.phoenixos.com iri uye iri kana ichikutendera kuti uise kune rakaomarara diski
Pindura kuna klc
Kali Linux Rolling Edition: inoenderera inogadziridza
Bvarura Windows password uchishandisa Linux operating system